भेस्पा एप्रिलियाको दशैं, तिहार, छठमा बम्पर प्राइज अफर ! मौकामा चौका हान्नुहोस् - Gandak News
भेस्पा एप्रिलियाको दशैं, तिहार, छठमा बम्पर प्राइज अफर ! मौकामा चौका हान्नुहोस्
गण्डकन्यूज द्वारा ३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १२:२० मा प्रकाशित 0
पोखराको मुटु महेन्द्रपपुल स्थित सीता भवनमा रहेको ‘सिताज लाइफ स्टाइल’ उच्च ब्राण्डको भेस्पाको आधिकारिक विक्रेता हो । अब यहाँबाट चाडपर्वको छेकोमा गज्जबको लाभ लिन सकिने भएको छ । भेस्पा एप्रिलिया खरिदमा विभिन्न मोडलहरुमा ग्राहकहरुले खरिद पश्चात हात खाली नरहने योजना अन्तर्गत विभिन्न खाले बम्पर अफरहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
भदौ २४ गतेदेखि सुरु भईसकेको यो अफर दशैँ, तिहार र छठ पर्वसम्म रहनेछ । अर्थात्, कार्तिक ३० सम्म गरी ६८ दिनसम्म चल्ने अफरमा विभिन्न अफरहरु जित्न सकिनेछ । सिताज लाइफस्टाइलका सेल्स म्यानेजर आशिष श्रेष्ठका अनुसार बम्पर अफर अन्तर्गत स्क्रयाच कार्ड मार्फत पाँच हजार देखी एक लाख सम्म नगद छुट वा बन्जी जम्प तथा जिप फलायरको टिकट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । निःशुल्क एशोसेरिजमा पन्ध्र हजार सम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै, बम्पर स्किम अन्तर्गत हरेक हप्ता लक्की ड्र मार्फत भाग्यशाली बिजेतालाई हेलीकप्टरद्वारा अन्नपुर्ण बेस क्यामपसम्मको यात्रा गर्न पाउने छन् । खरिद कर्ताले फाइनान्सको सुविधा तथा एक्सचेन्ज सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् ।